Ithemba ngoWayde enqoba owokozilolongela i-Olympics - Bayede News
Impilo iyaqhubeka kusele ngemuva osekudlulile – uSalah
UPeet van Zyl oyi-ejenti kampetha womhlaba ebangeni lamamitha angama-400 uWayde van Niekerk, ukuqinisekisile ukuthi lo msubathi uzogijima kulesi sigaba emqhudelwaneni we-Olympics azokuba seJapan ngoNtulikazi.
UVan Zyl ukuqinisekise lokho emva kokuthi uVan Niekerk enqobe ebangeni lamamitha angama-200 ku-ASA Athletics Invitation Meet ebingoLwesibili kusihlwa.
Lo mqhudelwano ububanjelwe eRuimsing Athletics Stadium eRoodeport, eGoli.
“Indlela agijime ngayo ngoLwesibili isinike ithemba lokuthi usesondele emgqigqweni aziwa ngawo. Simgijimisa ama-200m ngoba senzela ijubane. Maduze sizohlangana nomqeqeshi wakhe uLance Brauman ukuthola uhlu lwemijaho azozilungiselela ngayo i-Olympics,” kusho uVan Zyl.
UVan Niekerk enqoba lo mqhudelwano ubonge umqeqeshi wakhe omdala, uTannie Ans Botha.
Le nyamazane enguVan Niekerk ishaye intambo ngesikhathi esiwu-20.10 yehlula ingqwele yebanga le-100m u-Akani Simbine ogcine ephume isibili ngesikhathi esiwu-20.29.
UVan Niekerk owaphula irekhodi lo mhlaba ku-400m, ngesikhathi esiwu-43.03 kuma-Olympic Games edlule ngaphansi kuka-Ans uthe: “Ngiyakujabulela ukuba ngaphansi kwethimba elisha labaqeqeshi. Nokho angisoze ngalukhohlwa uhambo lwami no-Ans, ngifunde lukhulu kuyena. Ngabe kangikho kuleli zinga ukube ubengekho eduze kwami. Ngizoqhubeka nokumjabulisa.”
Ngasekuqaleni kwalo nyaka, uVan Niekerk ushiye lo mqeqeshi abesehlale naye iminyaka wajoyina uBrauman wase-USA.
UVan Niekerk unqoba lo mqhudelwano nje ubesehlale izinyanga ezili-17 engagijimi ngenxa yokulimala akuthola ngoMfumfu wangonyaka wezi-2017 edlala owobungani webhola lo mbhoxo.
Wayegcine ukubonakala eqhudelana kumaWorld Championship ayeseLondon maphakathi nonyaka wezi-2017.
Ubuyele ensimini ngoNhlolanja wezi-2019, maqede wanqoba u-400m ngesikhathi esiwu-47.28 emqhudelwaneni owawuseFree State. NgoNhlaba wanyakenye khona eFree State, wenze esiwu-20.31 ku-200m nesiwu-10.10 ku-100m.
Le nyamazane eveze ukuthi izobuyela maduze e-USA ithe ukulimala nokuhlasela kokhuvethe kuyihlukumeze kakhulu.
Nokho uthe kuyamjabulisa ukuthi uyisibonelo kubantu bakuleli nasemhlabeni jikelele ngokungadikibali.
Mayelana nokuthi usekulungele yini ukubuyela ku-Olympics azoba kulo nyaka eTokyo, eJapan, uthe: “Angiqale ngiveze injabulo engibe nayo ngokuhlula izingqwele ezinjengoSimbine. Okwamanje ngizothatha umjaho ngamunye, kangifuni ukuxhamazela, ngumqeqeshi wami ozongitshela uma sengiqatha ngokwanele. Ku-Olympics ngizogijima u-400m, nakuba kunjalo ngeke ikusasa ulazi, kuhle ukuhlala uzimisele.”
Nakuba ekhale ngaphansi uSimbine ongumpetha we-100m kumaCommonwealth Games, uthe kusukela ngonyaka odlule iyamjabulisa indlela agijima ngayo.
“Kuhlale kunokuqhudelana okuhle ukugijima eceleni kukaVan Neikerk. Engikubheke ngabovu manje ama-ASA Championships azoba emasontweni amabili azayo. Abantu abangelulekayo bahlakaniphile, ngethemba ukuthi ngizoqhubeka nokwenza kahle.”
UMengameli we-ASA uMnu u-Aleck Skhosana uthe imjabulise kakhulu indlela abasubathi abenze kahle ngayo yize sekunesikhathi bagcina ukusubatha.
Uthe uyamethemba kakhulu uVan Niekerk ukuthi angenza kahle ku-Olympics.
Kuzo ezithinta ezokusubatha, esifundazweni iKwaZulu-Natal amehlo azobe ethe njo eCoastlands Hotel, eThekwini lapho kuzobe kukhethwa umholi omusha weKZN Athletics (KZNA), lokho kwenzeka emva kokumiswa kwebhodi ebeliholwa uSello Mokoena.
Kwababanga lesi sikhundla nguNks u-Ayanda Mngadi, uMnu uKhulezweni Buthelezi, uMnu uSteve Mkasi noMnu uPatric Hlongwane.
Bonke laba bathembisa ukuletha izinguquko uma bengathola ithuba lokuhola leli bhodi.